January 20, 2022 - ApannPyay Media
ဆိုင်ကယ်ကို အိမ်သော့နဲ့ ခတ်ဖို့ မရှက်ကြပါနဲ့ (မန္တလေးမှာ ဆိုင်ကယ် လုံးဝအခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်နည်း) ဆိုင်ကယ်သူခိုးများသည် ဇက်သော့အားခြေထောက်ဖြင့် တွန်းကန်ကာ ဇက်သော့ကို ၂ စက္ကန့်အတွင်း ကျိုးသွားအောင် လုပ်ပြီးဆိုင်ကယ်ကို တွန်းသွားခြင်းနောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ခြေဖြင့်ကန်မောင်းသွားခြင်း စသဖြင့် ခိုးကြရာတွင် စီစီတီဗီ ကင်မရာမှ မြင်ရသော်လည်း ဘာမှ ပြန်လုပ်ယူ၍ မရတော့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဂျီပီအက်စ် တပ်ထားသော်လည်း ခိုးယူသည့်အချိန် အလျင်မြန် လိုက်နိုင်မှ တော်ကာ ကျမှာပါ။ အဲ့တော့ ကျနော်တို့ အစထဲက ခိုးဖို့ မလွယ်အောင် ခိုးဖို့အချိန်ကို သူခိုးအတွက် အချိန်များများမရအောင် ယခု နည်းလမ်းက အဆင်ပြေမလားလို့ပါ။ ရှေ့ဘီး ဒစ်ဘရိတ်သံကွင်းက အပေါက်လေးတွေမှာ အိမ်သော့အသေးလေးကိုခတ်ထားလိုက်ပါ။ တော်ရုံအချိန်နဲ့ဘယ်လိုမှ ခိုးလို့မရပါ။ ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းသွားလို့လည်း မရပါ။ ဇက်သော့ကျိုးသွားခဲ့ရင်တောင် ဆိုင်ကယ်ကို … Read more
၈၈ ကထက် ပိုဆင်းရဲသွားနိုင်မယ့် မြန်မာပြည် စီးပွားရေးအခြေအနေ ရေ ရဲ့ဖိအား ဆိုတာ အောက်ရောက်လေ ဖိအားကြီးလေ ပိုမြုပ်လေပဲ။ စုံးစုံးမြုပ်တယ် ဆိုတာ အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့။ စီးပွားရေးဟာလည်း ဆင်းရဲလေ အောက်ရောက်လေ ပြန်တက်ရခက်လေပါပဲ။ အာဖရိကဆို တတိုက်လုံး ရာစုနှစ်ချီ နလံမထူဘူး။ လက်ရှိ နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး မတည်ငြိမ်ဘူး၊ ဒေါ်လာ၊ ရွှေ ထိုးတက်တယ်၊ မီးမရဘူး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျတယ်၊ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဘူး၊ အားလုံးအကြောင်းစုံတော့ တိုင်းပြည်ဟာ ကုန်းဆင်းမှာလှိမ့်နေတာ အတော်အရှိန်ရလာပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေကို reverse လုပ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင် အတော်ရှားတယ်။ နိုင်ငံ တနိုင်ငံရဲ့ depression တွေ ပြန်တည့်ဖို့ ဆယ်စုနှစ် ချီပါတယ်။ ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ရင် ဒီလိုမီးပျက်ပုံမျိုးနဲ့ နွေ နဲ့မိုးမှာ အရာရာ ဈေးတက်မှာပဲ၊ မီးမလာ၊ … Read more
ရန်ကုန် လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထဲက အိုင်ဒီယာဆန်းတဲ့ စာအုပ်စက်ဘီးလေး ရန်ကုန်မြို့ လှဉ်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းဆိုတာ လူသွားလူလာ များပြား ရှုပ်ထွေးတဲ့ လမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်တန်းတက်ကြသူများ၊ အလုပ်ကိစ္စ သွားလာလှုပ်ရှားကြသူများနဲ့ အမြဲလိုလို စည်ကားတတ်တဲ့ နေရာ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထဲမှာ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေ အများအပြား ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေ ကြားထဲမှာ အိုင်ဒီယာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုင်လေးကတော့ စာအုပ် စက်ဘီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးပေါ်မှာ စာအုပ်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ ခြင်းတောင်း တင်ထားပြီး လူငယ်လေးတွေက ရောင်းချပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်များကိုလည်း မြည်းစမ်း ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း မှာယူလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေလည်း မှာယူနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ … Read more
ဝယ်သူအပေါ် ဂျင်းတွေထည့်နေတဲ့ အကွက်ရိုက်မြေကွက်ရောင်းသူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အကွက်ရိုက်ပြီး မြေကွက်ရောင်းသူတွေရဲ့ ဝယ်သူအ‌ပေါ် ဂျင်းထည့်ပုံ တရားမဝင် မြေကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ဘူးဆိုပေမယ့် အမြတ် အရမ်းကျန်ပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ မြေကွက်ဟာဈေးသက်သာလွန်းရင်လည်း ဝယ်သူ မယုံကြည်မှာစိုးတာကြောင့် ဝယ်သူယုံကြည်လောက်တဲ့ ဈေးအထိဈေးတင်ပြီး ရောင်းကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း တရားမဝင်အကွက်ရိုက်ရောင်းတဲ့ ဈေးကွက်အတွက် အမြတ်အစွန်းများစွာကို ရစေပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ တစ်ဧက သိန်း ခုနှစ်ဆယ် ရှစ်ဆယ် တစ်ရာ လောက်နဲ့ ပေးဝယ်ရတဲ့မြေဟာ အိမ်ဝိုင်းကွက်ရိုက်ပြီး ပြန်ရောင်းရင် မြေအနေအထားနဲ့ လမ်းအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ၁၄ ဝိုင်းကနေ ၁၆ ဝိုင်းအထိရတာဆိုတော့ တွက်လိုက်ရင် အိမ်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းစာအတွက် မြေတန်ဖိုးဟာ ခြောက်သိန်းခွဲ ခုနှစ်သိန်းလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ အဲ့ဒါကို တစ်ဝိုင်း ဆယ်သိန်းလောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုရင် ဝယ်သူတွေအတွက် ဈေးချိုလွန်းတယ် … Read more
လွယ်လွယ်ကူကူ အာဟာရပြည့်ဝသော ငချိပ်ကန်စွန်းဥ မုန့်သားအိအိလေး ပြုလုပ်နည်း လွယ်လွယ်ကူကူ အာဟာရပြည့်ဝသော ငချိပ်ကန်စွန်းဥ မုန့်သားအိအိလေး အိမ်မှာ လုပ်စားကြရအောင်.. ငချိပ်ကန်စွန်းဥ အနေတော် ၂ လုံးကို အိအောင်ပြုတ်ပြီး ကြေအောင်ချေထားလိုက်ပါ.. ပြီးရင်ဆား ၁ ဇွန်း (လက်ဖက်ဇွန်း) သကြား ၁ ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း) နွားနို့ကျိုပြီး ၄ ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း) ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အားလုံးထည့်ပြီးရင် နှံ့သွားအောင်နာနာမွှေပေးလိုက်ပါ။ ဂျုံမှုန့် ၂၀၀ ဂရမ် (200g) ထဲကို ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်.. ပြီးရင် ကျိုထားတဲ့ နွားနို့အေး ကော်ဖီခွက် ၂ ခွက်ကို သကြားအချိုကြိုက်သလောက် ထည့်ဖျော်ရပါမယ်။ ဂျုံမှုန့် ကြက်ဥထဲ ဖျော်ထားတဲ့ နွားနို့ ၂ ခွက်ထည့်ပြီး အခဲမရှိအောင် နာနာဖျော်ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် … Read more
ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စရာမလိုတဲ့ ငွေမပြတ်စေတဲ့ ယတြာ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်ျမားထဲက တင်ပြလိုက်တာဖြဈပါတယ် အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ယတြာ နွင့် ဈေးဆိုင် အေရာင်းဆိုင်မွာ ဧည့်သည်စည် ကားစေရန် ယတြာ တွေ ငွေဖလား ဒါမွမဟုတ် ကြေးဖလားတဈလုံးထဲမွာ ငွေစက္ကူထဲက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ငွေစက္ကူတဈရွက် ကိုဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေစက္ကူ အတိုင်းအတာနဲ့တွက်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်၊ တတ်နိုင် တဲ့လူအတွက်ကေတာ့ တဈသောငျးတနျပေါ့၊ဒေါျလာနဲ့အလုပျလုပျနသေူဆိုရငျတော့ ဒေါျလာ ထည့်ပေါ့ ပြီးရင်အဲဒီငွေစက္ကူထည့်ထားတဲ့ဖလားထဲကို ရေဖြည်းဖြည်းခြင်းလောင်းထည့်ပါ ။ ရေစက်ခွက်ထဲကိုရေစက်ခတြဲ့အခါလောင်းသလို မြိုးလောင်းထည့်ပါ ရေလောင်းနေတဲ့အခြိုန်မွာ ဂုဏျတောျ ၉ ပါးကို ၉ ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်နေပါ၊ ပွီးတာနဲ့ရမွေုပျနတေဲ့ငှစေက်ကူပေါျကိုခေါငျးလောငျး တဈလုံးတင်ထားလိုက်ပါ မကြာခဏ အဲဒီခေါင်းလောင်း ကိုယူပြီးတီးပါ၊ခေါင်းလောင်းတီးနေတဲ့အခြိန်မွာလည်း ဂုဏျတောျ ၉ ပါးကို ၉ ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်ပါ။ အဲဒီဓါတ်ဆင်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူထည့်ထားသော ဖလားနဲ့ခေါင်းလောင်းကို ဘုရားစင် ဒါမွမဟုတ် … Read more
ကြက်ဖပျိုတွေလို မသန်မာပေမယ့် ဉာဏ်သာသွားတဲ့ ကြက်ဖအိုကြီး (ကြက်ဖကြီးဉာဏ်ကောင်းတယ်) တစ်နေ့မှာ…လယ်သမားကြီးဟာ ကြက်ဖလေးတစ်ကောင်ကို ဈေးထဲက ဝယ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီနောက် ကြက်ဖလေးကို သူ့ရဲ့ကြက်ခြံထဲမှာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကြက်ဖလေး ခြံထဲကို ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ ကြက်မတွေအလယ်ကောင်မှာ အခန့်သားနေနေထဲ ကြက်ဖအိုကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ် ကြက်ဖအိုကြီးက —“ဟေ့ကောင်လေး.. ကြိုဆိုပါတယ်” လို့ဆီးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကြက်ဖကြီးကို ကြက်ဖလေးက အဖက်မတန်သလိုနေလိုက်တယ်။ ခြံထဲမှာရှိတဲ့ ကြက်မတွေကို သူလိုက်ပြီးအကဲခတ် နေတုန်းမှာပဲ ကြက်ဖကြီးကဒီလိုပြောတယ် “ကောင်လေး..ဒီခြံထဲမှာ ကြက်မ (၂၅) ကောင်တိတိရှိတယ်။ ငါက အိုလာတော့ သူတို့ ဥဥ နှုန်းကျလာတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းကို လယ်သမားကြီးက အသစ်ဝယ်လိုက်တာပဲ။ ငါ့ကို ငဲ့ညှာတဲ့အနေနဲ့ ကြက်မ (၂၄)ကောင်ကို မင်းယူပြီး ငါ့အတွက် ကြက်မလေး (၁)ကောင်လောက်တော့ ချန်ထားပေးပါကွာ..ဒီတစ်ခုတော့တောင်းဆိုပါရစေ” အဲဒီလို … Read more
ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်… ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်… ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ သုံးလို့ရမယ် VPN နှင့်အသုံးပြူနည်းလေးများ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…ဖုန်းဘေလ် မရှိလဲ … Read more
ဈေးသွားရင် ဘာချက်ရမလဲတွေးရတာ စိတ်ညစ်နေသူများ အတွက် (၁). ကြက်သားအာလူးဟင်း+ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၂). ငါးမွှေ+ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ ငရုပ်ပွကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၃).ငါးဖယ်ငါးဆုတ်+ကျောက်ဖရုံသီး ချဉ်ရည်+ရုံးပတီသီးကြော်+ငါးပိထောင်း (၄).ပုစွန် ဆီပြန်+ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည် + ပန်းဂေါ်ဖီကြက်ဥ+ငရုပ်သီးဆားထောင်း (၅). ဘဲဥဆီပြန်+ ပဲရွက်ဟင်းချို+ ကင်းပုံသီးချက်+ ငံပြာရည်ချက်+တို့စရာ (၆). ပုစွန်ဘော့ချိတ်+ ဂေါ်ရခါးသီး အချိုချက်+မြင်းခွာရွက်သုတ်+ငါးပိချက် (၇).ဝက်သနီချက်+ဘူးသီးချည်ရည် +ရွှေပဲသီးဥနီ+ဘာလချောင်ကြော် (၈). ကကတစ် ကြက်ကသွန်နှပ်+ဂေါ်ဖီရွက် ကြာဆံဟင်းခါး+ခရမ်းသီးသုတ်+ငါးခူငါးပိကောင် (၉). ငါးထမင်းဆိမ့်+ ကြက်ကြော်+ ဘူးသီးဟင်းခါး (၁၀). ကြက်သားဆီပြန် + ပဲကြီးဆူးပုပ် + သရက်သီးပိုးတီသုပ်+ငံပျာရည်ကြော် (၁၁).ဝက်သားအာလူးဟင်း+ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းချို + သရပ်သီးသနပ် + ငါးပိကြော် (၁၂).ကြက်သားကာလသားချက် ဘူးသီးရော+နံရိုး ကျောက်ဖရုံဟင်းချို +ပုစွန်ချဉ်သုပ် + ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် … Read more
ခေါင်းကိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ဇက်ကြောတက် ခြင်းကို သက်သာပျေက်ကင်းစေတဲ့နည်း ခေါင်း ကိုက်။ နထင်ကိုက်။ ဇက်ကြောတက် မျက်ရိုးကိုက်။ အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင် ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီးနထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ ။ ဇက်။ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ ကျီးပေါင်းရင့်၍မူးသူ။ ဇက် ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ် တွင်ချင်းကိုပါးပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် ။ ချင်းတွင်အပူဓာတ်ရှိသည်။ အရောင်ကျစေသောသတ္တိလည်းရှိသည်။ ပိုးကိုသေစေနိုင်သောသတ္တိလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါသည်။ချင်းသည်အပူဖြစ်သဖြင့် ကပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာနိသင်ပြပါသည်။ တစ်နာရီခန့်ကပ်ထားပါ။ အများဆုံး အလွန်ဆုံး ၂နာရီထကာပို၍မကပ်သင့်ပါ။ တန်ဆေးလွန် ဘေးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် ၁နာရီခန့်ကပ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ နောက်တစ်နည်း – ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများအတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း)၊နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ။ခေါင်းတစ်ြ်ခမ်း … Read more